Ex Wasiir Goodax oo si kulul u weeraray Madaxweynaha Hirshabelle | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ex Wasiir Goodax oo si kulul u weeraray Madaxweynaha Hirshabelle
Ex Wasiir Goodax oo si kulul u weeraray Madaxweynaha Hirshabelle
Cabdullaahi Goodax Barre, Wasiirkii hore ee Waxbarashada Somaliya ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ayaa weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle ayaa 11-kii bishii November, Cali Guudlaawe u doortay inuu noqdo Madaxweynaha Hirshabelle, ka dib doorasho ka dhacday Magaalada Jowhar.
Cabdullaahi Goodax Barre ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya, oo uu siiyay Hiiraan Online ku soo hadalqaaday is bedelka ka dhacay Hirshabelle.
“Sida aad la socotaan Hirshabelle mar walbaba nasiib waxay u yeelatay Madaxweynihii markaasi jooggaa inta dhoodhoobto ayaa dad hunguri ka galaa inuu meeshaa ka soo helo. Madaxweynihii horaa sameeyay, kana waa sameynooyaa sida muuqata. Ma wax cusubaa? Waa maya. Ma wax fiicanaa? Aad bay u xun tahay in ummad dhan masiirkeeda kursi la raadinayo lagu khaldo, oo la dhex gelinayo.” Ayuu yiri Cabdullaahi Goodax Barre.
Isagoo si adag u weeraraya Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle ayuu yiri “Haddaba maxaa cusub oo shalay aan jirin oo hadda jiro? Hadda waxaa jira nin la yiraahdo Cali Guudlaawe, uma arko xitaa shakhsi wanaagsan oo madax noqon karo. Maxaa yeelay waan aqaanaa hortiisaana ka sheegay. Waa dadka miyiga ku soo weynaaday oo jecel inuu qabiil ka shaqeeyo, maantoo dhan mashquul ku ahaado qabiil, waana nin neceb isir, isir neceyb uu ku jiro, mana xamanayo hortiisaan ka iri, ayadoo Madaxweynihii isaga ka horeeyay iyo asxaab kaloo badan ay wada fadhiyaan ayaa waxaan u sheegay nin yahow neceybka isirka ah iska jooji.”
Waxa kaloo uu yiri “Neceybkan isagu haddee dhaqankiisii reer miyiga ayuu wataa oo runtii wax badan ka caawinayo, laakiin horaa loo geliyay naftirkiisa waa wuxuu horey ugu soo shaqeystay. Wuxuu horey ugu soo shaqeystay waaye inuu isir neceyb qabo, wuxuu la joogay rajiimkii kan ka horeeyay oo umadda degan Hiiraan luqunta isu geliyay, oo hal qabiil qoorta u geliyay wixii kale qabiil ahaa oo dhan, ku dadaalay in qabiilkaas la naco, u ololeeyay, shaqo weyna ka qabtay, illaa qabiiladii kale ayba aaminaan in qabiilkan ay isla degan yihiin ay colaad kala dhaxeyso. Tan runtii jirto weligeyd colaad qabaa’ilka meeshaas degan iyo qabiilkaas ka dhaxeeyo weligeyd maba dhicin, taariikhdana laguma hayo.”
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Waxaa meeshii la keenay nin isir neceyb qabo iyo nidaam ka shaqeynayo isir neceybnimada, hal qabiil beegsanayo, maxay dhashay waaye? Waxay dhashay in dhaqan aan horey u jirin inay maanta meeshii keento, oo ah jabhad, ma haddaa jabhad loo noqonayaa? Waxa wadankeena dhib iyo jabhad uu soo maray, ma haddaa jabhad loo noqonayaa? Laakiin maxaa keenay waaye? Waxaa keenay qof iyo dad raba inay kuraas boobaan, oo qabaa’ilka luqunta isu gelinayo.”
Waxa uu intaa ku daray inaanan mushkiladda taagan looga gudbi karin in wafuud uun loo diro gobolkaasi, lana yiraahdo la soo hadla dadka deegaanka.
Xildhibaan Goodax ayaa ku dardaarmay in xalka uu yahay in Dowladda Federaalka ay la fariisato dadka meesha degan, isla-markaana ay kala hadasho, sida looga gudbi karo dhibka taagan.
Hadalka Goodax ayaa ku soo aadaya, xilli bulshada Magaalada Beledweyne ay si weyn uga soo horjeedaan safarka uu Madaxweyne Guudlaawe doonayo inuu ku taggo magaaladasi.
Previous articleDagaal saaka ka socda Magaalada Beledweyne
Next articleDadweyne diidan safarka Cali Guudlaawe oo xiray wadooyinka Beledweyne